Pyatadar Pagoda with Star Trails (Bagan Ancient City)
ညဘက် မှောင်နေတဲ့ အချိန် ပြဿဒါး ဘုရားထဲကနေ ရိုက်ထားတာပါ... အဖြူရောင်၊ အပြာရောင် မျဉ်းကြောင်းများကတော့ ကြယ်လေးတွေပါ... စက္ကန့် ၃၀ စာစီ ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံ ၆၀ လောက်ကို software နဲ့ ပြန်ပေါင်းထားတာပါ... အစက်ပြောက် ၁-ခုအနေနဲ့ မြင်နေရတဲ့ ကြယ် ၁-လုံးဟာ ကမ္ဘာလည်နေတာကြောင့် မျဉ်းကြောင်းလေးတွေ ဖြစ်သွားတာပါ...
ဒီရိုက်နည်းကို ပြောပြပေးတဲ့ NativeMyanmar မှ ကိုboothee နဲ့ ကိုSuperNova ကို ကျေးဇူး အရမ်းတင်ကြောင်းပါ... ကိုSuperNova ရှင်းပြထားတဲ့ Star Trails ရိုက်နည်းကို ဒီနေရာမှာ သွားရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ကြောင်းပါ... (NativeMyanmar member ဖြစ်ရန်တော့ လိုအပ်ကြောင်းပါ)
My Labels: Bagan Photos, Pagan, Ancient City, Myanmar, Burma, Pagoda, Star trails
Nay Ma Htoo said…
Hello, ko mg
I am very glad to meet you here. Can you give meahand please. I am creatingablog and experiencing in making " Zawgyi font EOt" In my computer I made as you say but at the last step when I add URL address ,the download file aren't appear that's why I can't continue. please explain for me ,
if possible can you write with burmese and sent to my email. [email protected]